Mumbai: Manery Ireo Ankizy Hilalao Any Amin’ny Tany Maloto Ny Tsy Fahampian’ny Tany Malalaka · Global Voices teny Malagasy
Mumbai: Manery Ireo Ankizy Hilalao Any Amin'ny Tany Maloto Ny Tsy Fahampian'ny Tany Malalaka
Voadika ny 01 Janoary 2017 20:24 GMT
Noho ny tsy fahampian'ny tany malalaka, voatery milalao cricket eny an-dàlamben'i Mumbai ny tanora. Sary an'i Mohamed Nanabhay, ao amin'ny Flickr. CC BY 2.0
Ity lahatsary ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Video Volunteers, vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena mpampita vaovao nahazo maripankasitrahana, mitoetra any India. Misy dika navoaka ity ambany ity ho isan'ny fifanarahana mifampizara votoaty.
I Mumbai no tanàna be mponina indrindra any India miaraka aminà vahoaka tombanana ho 18.4 tapitrisa. Fitambaranà nosy fito io faritra io tany am-piandohana, saingy nahazo ity endrika mitohy ity ny tanàna noho ny tetikasa fanotofana tany tany tamin'ny tapaky ny taonjato faha-18. Amin'ny maha-renivohitra ara-bola, ara-barotra ary fialàna voly ao India azy, dia nahasarika olona marobe izy nandritra ny taona maro — ary manomboka feno ny tany malalaka ao aminy. Na ireo zaridainany voatokana aza dia misy miditra antsokosoko na ahofa.
Misy fiantraikany any amin'ireo ankizy ny fihenan'ny tany malalaka any amin'ny faritra manamorona an'i Mumbai, izy ireo izay tia mihazakazaka, milalao ary miala voly. Misy ireo toerana fanaovana fanatanjahantena izay mampanofa toerana sy fitaovana misy sarany, saingy ho an'olom-bitsy izay manambola natao ho an'izany ihany ireny, ka mbola mamela ny maro an'isa ho anatin'ny filàna. Manery ireo tanora Indiana hikaroka toerana hilalaovana ity tsy fahampian'ny tany malalaka ity, izay mety tsy dia tsara ho azy ireo, tahaka ny arabe.
Efa ho 10 taona no mpisolovava amin'ny mba hanisiana toerana ho an'ny ankizy any amin'ireo tanàna ivelan'i Mombai i Amol Lalzare, mponina ao amin'ny vondrom-piarahamonin'i Mumbai mifanerasera amin'ny Video Volunteers. Manome tatitra an-dahatsary izy mikasika ny tolon'ny ankizy te-hilalao any amin'ireo faritra tery dia tery manamorona an'i Mankhurd, ao Mumbai.
Dinesh, 10 taona, sy ireo namany milalao cricket ao anaty faritra iray voahodidin'ny tain'ireo manodidina, ankizy mamo tampona, vakin-tavoahangy, sy lota maro samihafa. Afenin-dry zareo ny ray aman-dreniny ny toetoetry ny ‘toerana filalaovany’. ” Tsy lazainay amin'ny ray sy reninay hoe eto izahay no milalao”. Mihevitra ry zareo hoe any aminà toerana madio izahay no mandeha milalao. Raha fantatr'izy ireo hoe eto izahay no milalao, tsy ho avelan'izy ireo mivoaka milalao intsony izahay”, hoy i Dinesh tamin'i Amol.
Mitarika ny ankizy hiharan'ny fanapempoana, sotasota ara-nofo na ny faran'izay ratsy indrindra dia ny fanaovana herisetra ara-nofo, ny filalaovana eo amin'ilay toerana ilaaovan-dry zareo. Ny tsy fahampian'ny toerana malalaka indrindra indrindra no miteraka sakana ho an'ireo ankizivavy satria ny fiahiana ny tsy hahavoatohintohina azy ireo no voalohany amin'ny olan'ireo ray aman-dreny, araka ny asehon'ny lahatsarin'i Amol. Ambaran'ny fikarohana vao haingana nataon'i Pukar, ONG iray ao Mumbai, fa ny tsy fahampian'ny toerana no manery ireo ankizivavy handao ny filalaovana dieny mbola any amin'ny faha-12 taonany. Raha mitaha amin'ny ankizilahy izay tonga hatrany amin'ny faha-20 taonany.
“Na inona na inona ireo lalao, isan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny filalaovana,” hoy i Amol anatin'ilay tatitra an-dahatsary. “Miatrika hasarotana marobe ireo ankizy eo amin'ny manodidina ahy raha mitady toerana azo antoka hahafahana milalao, ary fikasako ny hanova izany ho azy ireo.”
Ny antony mahatonga ny kianja filalaovana ho ilain'ny ankizy
Noho ny fihenan'ny toerana misokatra any amin'ireo faritra ambanivohitra, indrindra ireo trano filalaovana, tsy mahagaga ny mahita ankizy milalao eny amin'ny arabe na toerana sahala amin'izany.
“Asehon'ireo tarehimarika isankarazany ny tahan'ireo toerana malalaka isam-batanolona ao Mumbai araka ny fandaharana any amin'ireo tanàna fanrany ambany amin'uireo tanandehibe be olona eto amin'izao tontolo izao, ary indrindra indrindra raha toa tsy tafiditra ho toy ny toerana misokatra ho an'ny rehetra ny zaridaina nasionaly sy ny ala honko,” hoy ilay mpanoratra momba ny natiora sady mpiahy ny natiora rahateo, Sunjoy Monga.
Raha alahatra amin'ireo tanandehibe to azy, toa an'i New York sy Singapore, any anaty lavaka mangitsokitsoka ny filàn'i Mumbai zaridaina sy toerana filalaovana. Abaribarin'ny fanadihadiana iray tamin'ny 2012 nataon'ny Open Mumbai ny taha mampitanàka vava; toerana misokatra 0.03 acres (0 m²) isaky ny olona 1.000 — lavitra tena lavitra raha mitaha amin'ny any Londona izay 12 acres (4,8 hektara) , 4 acres (1,6 hektara) ho an'i New York ary 6 (2,4 hektara) isaky ny olona 1.000 ho an'i Singapore.
Tanatinà didim-pitsarana iray mahakasika tany fikosoham-bary iray tamin'ny 2005, nanamarika ny Fitsarana Avo ao Mumbai fa mety ho teraka miaraka aminà fahasembanana ara-tsaina sy ara-batana ireo ankizy raha toa ka mihena be ny oksizena noho ny tsy fahampian'ireo toerana misokatra sy trano fialàna voly.
Ho an'i Amol kosa, tiany hanana fialofana azo antoka ahafahany mihazakazaka sy milalao malalaka araka ny tokony ho izy ireo ankizy ary nanao fangatahana tany amin'ny mpikambana ao amin'ny filankevitra ao an-toerana izy.
Ireo mpifandray amin'ny vondrom-piarahamonin'ny Video Volunteers dia avy amin'ireo vondrom-piarahamoina voahilika any India, izay mamokatra lahatsary mikasika ireo tantara tsy voatatitra. “Vaovao avy amin'ireo miaina azy” ireny tantara ireny”. Manome ny zavamisy tena avy eny an-toerana ho an'ny fandrakofam-baovao manerantany momba ny zon'olombelona sy ny fanambin'ny fandrosoana izy ireny.
7 andro izayIndia